पशुपतिनाथमा पश्चिमा गोराहरुलाई प्रवेश दिँदा के अप्ठ्यारो हुन्छ र ? - Medianp.com
पशुपतिनाथमा पश्चिमा गोराहरुलाई प्रवेश दिँदा के अप्ठ्यारो हुन्छ र ?
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २८, २०७३१२:३८0	निप्रेश उप्रेती । आज आमा र दिदीकोसाथ सपरिवार पशुपतिनाथ गइयो । म सधैं भन्छु,“की आमाको साथमा की पशुपतिनाथमा ईश्वरको अनुभूति हुन्छ।
मन्दिरको मुलद्वारमा प्रवेश गर्न लाग्दा एउटा दृश्यको साक्षी बनेँ । द्वारपालले एकजना पश्चिमा गोरो छाला भएको व्यक्तिलाई मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्न दिएन । हो पशुपतिनाथमा गैर हिन्दुलाई प्रवेश मनाही छ । त्यो नियम रहेसम्म पालना गर्नु पर्छ हामी विधिको शासन मान्ने मान्छे हौँ ।
तर, उसको रंगको कारण तिमी मन्दिरमा जान सक्दैनौ भन्नु गलत थियो । हामी जस्तै रंगको नभएर के भो ऊ पनि हिन्दु हुन सक्थ्यो । अहिले युरोप अमेरिकामा हिन्दु धर्म अंगाल्ने, वेद, गीता अध्ययन गर्ने र योग र ध्यान गर्नेहरुको वृद्धि तिव्र र उल्लेख्य छ । बरु उसलाई यो सोध्न सकिन्थ्यो, तपाईंको धर्म के हो?
अर्को कुरो कोही पशुपतिनाथको दरबारमा यदी कोही आउँछ भने उ केही जिज्ञासा लिएर आएको हुन्छ, आकर्षित भएर आएको हुन्छ। जिज्ञासा र आकर्षण पलाउनु नै हिन्दुत्वलाई मौन रुपमा अपनाउनु स्वीकार गर्नु पनि हो । र उ जुनसुकै आस्थाको भए पनि त्यतिबेला गैरहिन्दु रहँदैन । फेरि पशुपतिनाथको त्यो पावन आँगनमा जो आउँछ उ प्रभुकै हुन्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ सुरक्षाको सम्पूर्ण विधि अपनाएर पशुपतिनाथ भित्र सबैलाई प्रवेश दिइनुपर्छ ।
अर्को मैले के महसुस गरेँ भने पशुपतिनाथ र यसका वरपरका संरचनाहरु जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । सरकार प्रशासन भ्रष्टाचारमा लिप्त, लम्पसारमा मस्त र विदेशी धर्म संस्कृतिको गुलामी गर्न व्यस्त छ, जबकी मुलुककै सबै भन्दा ठूलो धरोहर पशुपतिनाथको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा पूर्ण उदासीन छ । जति पर्यटक अन्य कारणले हामीले भित्राइरहेका छौं, त्यसको कयौं गुणा बढी पर्यटक भित्र्याउने सामर्थ्य एक्लो पशुपतिनाथको छ । मध्यकालीन कला कौशलको अद्वितीय नमुना यो मन्दिर हिन्दुहरुको सबैभन्दा ठूलो आस्थाको केन्द्र हो । जति धार्मिक पर्यटन संभावना छ त्यती अरु केहीको पनि छ । पशुपतिनाथ हाम्रो हो । मनमा नेपाल र नेपाली हुनेहरुको हो । हाम्रो आफ्नोपन हाम्रो गौरव हो, सयौं वर्षको इतिहास हो र विश्वलाई हामीसँग यस्तो पनि छ भनेर गर्वले देखाउन सकिने धरोहर हो ।
केही जातिवादी नेताहरु मिशनरीको डलर पचाएर हिन्दु धर्म हाम्रो हैन भन्दै भ्रम छर्ने सद्भाव भड्काउने काममा तल्लिन छन् । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भड्काउवादीहरुको प्रभाव केहि हदसम्म मैले पनि देखेको छु । तर, पशुपतिनाथमा त्यसको कुनै प्रभाव देखिन । यद्यपी म दुनियाँमा कुनै जातजाति सम्प्रदाय रंग नमान्ने मान्छे हुँ । मान्छेको त केवल दुई जात– महिला पुरुष । पछिल्लो समय कथित जातिवादीहरुले भन्ने गरेका आदिवासी जनजातीहरुको संख्या पशुपतिनाथको आँगनमा सरावरी नै देखेँ । सबैले यति बुझौं कुनै पनि धर्म कुनै जातजाति, सम्प्रदाय वर्ण रंग विशेषको हुन्छ भन्ने हुँदैन । जहाँ आस्था त्यहीँ धर्म । त्यसैले हिन्दु धर्म कुनै जातजाति र वर्ण समुदाय विशेषको हो भन्छ भने त्यो दलाल हो त्यस्ताको कुरा नपत्याउन हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु। पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।
(लेखक उप्रेती चलचित्र पत्रकार हुन् । )
कांग्रेसले न्यायलयको सम्मान गर्नुपर्छ : कोइरालाकेपी ओली बैंकक गएपछि एमाले स्थायी समिति बैठक बस्दै